Biography uye mabasa aCésar Vallejo, anonyanya kudarika munyori wePeruvia. | Zvazvino Zvinyorwa
César Vallejo (1892-1938) aive munyori wechiPeruvia, munyori wenyaya, munyori wenhau pfupi, uye mudetembi.. Akamira kunze kuti awane mukurumbira wakakura mune yega yega zvinyorwa zvemhando dzakagadzirwa. Basa rake mazuva ano rakasiya mucherechedzo, uye muunganidzwa wake wenhetembo Vatema vanozivisa humbowo hwazvo.
Iyo avant-garde inozivikanwa zvakare mu Basa renhetembo raVallejo. Kubata kwake mutauro, kuwedzera kune hupfumi hwake hwezvinhu pakunyora, zvakamupa chinzvimbo chakakomberedzwa pakati pevanyori venguva. Tungsten Icho chimwe chezvidimbu zvacho zvinomiririra.
1.2 Vallejo Dzidzo
1.3 Vechidiki muTrujillo
1.4 Hupenyu muLima
1.5 Basa rake rekutanga
1.6 Kusungwa zvisina mhosva
1.7 Hupenyu muParis uye kufa
Santiago de Chuco akaona nyanduri akazvarwa. Akauya pasi rose munaKurume 16, muna 1892. Mhuri yake yaive Meztizo, yemuno neSpanish. Nzvimbo yake yaigadziriswa pakati petsika dzakadzika midzi, uye basa rakavimbika raive muenzaniso wezuva nezuva. Francisco de Paula Vallejo Benítez aive baba vake, munhu akakosha mukurerwa kwake. Amai vake vaive María de los Santos Mendoza, uyo akaedza kumutungamira nekutenda kweKaturike. Iye munyori aive nevanin'ina gumi, ndiye aive wekupedzisira.
Iyo 271 Chikoro Center cheSantiago de Chuco ndiyo nzvimbo iyo Vallejo akatanga kosi yake. Panguva iyoyo, zvaifungidzirwa kuti mukomana uyu aizove mupirisita. Muna 1905, César akapinda muColegio Nacional San Nicolás muHuamachuco. Ikoko akapinda makirasi kusvika muna 1909.
Zvisinei nekuomerera kwemhuri kuti Vallejo anonamata, pazera remakore gumi nemasere akapinda National University yeTrujillo. Ikoko akatanga zvidzidzo zvake zvetsamba. Zvisinei, kushaya kwemari mumba make zvinhu zvakaoma, saka munyori aifanira kumbomira kudzidza. Mushure mekugumburwa ikoko, César akafunga kuyedza kudzidza zvemishonga. Zvisinei, munguva pfupi akarega. Kunyangwe kufungidzira kwakashata, mudetembi akakwanisa kudzokera kubasa retsamba, uye muna 1915 akawana dhigirii rake.
Chikamu icho César Vallejo aigara muTrujillo chakazara nezvakaitika, akabatana ne North Boka, kwaive kwevechidiki maartist nevakadzidza. Uye zvakare, akapihwa nemukana wekushambadzira mamwe mavhesi ake munhau dzemuno; yakanga iriwo nguva yerudo.
Muna 1917 akadonha achipenga murudo naZoila Rosa Cuadra, musikana ane makore gumi namashanu. Asi iyo pfupi yenguva yehukama yakamushungurudza uye akapotsa atora hupenyu hwake. Nekudaro, shamwari dzake vaive vakareruka murima nekuti vakamugutsa kuti aende kuguta guru rePeruvia kunoita doctorate.
Mufananidzo waCésar Vallejo.
Vallejo akasvika muguta guru rePeruvia mukupera kwa1917. Waive musi waDecember 30, chaizvo. Paakangosvika, akatanga kutaurirana nerunyararo denderedzwa revanyori. Manuel González Prada naAbraham Valdelomar vaive shamwari dzakajairika dzehurukuro mumasikati eLima. Panguva iyoyo, magazini South America yakashandira mudetembi senzvimbo yemazhinji ekubatira pamwe nhetembo.
Pasina mwedzi mitatu yakapfuura apo Vallejo akatanga kudzidzisa. Mumakore iwayo aive nehukama hune rudo nevechiri kuyaruka Otilia Villanueva, izvo zvakaita kuti arasikirwe nebasa pachikoro. Gare gare, Akatanga kushanda semudzidzisi wegirama kuNuestra Señora de Guadalupe National School.
Basa rake rekutanga
Muna 1919 Vallejo akaburitsa rake rekutanga basa, Vatema vanozivisa. Iko kuunganidzwa kwenhetembo kwakamira kwakakura kwazvo. Iri bhuku raive nezvinhu zvemazuva ano uye rakabatwa naro anodzokororwa madingindira eVallejo, ane chekuita nekutambura kwevanhu. Nezita iri akazopinda mumitauro yeLatin America; gore rakatevera racho akaenda kumusha kwake.
Kusungwa zvisina mhosva
Pandaive muSantiago de Chuco, César Vallejo akapomerwa mhosva yekupisa imba yemhuri yevatengesi muguta.. Saka akapedza ingangoita mwedzi mina mutirongo reTrujillo. Nhamo iyi yaisava chigumbuso kuti nyanduri amire kunyora. Muchokwadi, akatohwina mumakwikwi ezvekunyora.
Kunyangwe nyaya yacho yanga isina kuvharwa, imwe nguva gare gare akakwanisa kuenda pasi pemamwe mamiriro ndokudzokera kuguta guru renyika. Ikoko akaburitsa, muna 1922, Trilce, muunganidzwa wenhetembo wakamutsiridza nhetembo dzaizivikanwa panguva iyoyo. Gore rakatevera seti yenyaya yakauya pachena Zviyero zvakavezwa.
César Vallejo, kuruboshwe, ku II International Congress yeVanyori Yekudzivirira Tsika. Spain, 1937. Kukwatata iwe unogona kuona Pablo Neruda.
Hupenyu muParis uye kufa
Vallejo akaenda kunogara kuParis muna 1923 achitsvaga zviitiko zvitsva, Ikoko akashanda munhau dzakasiyana siyana dzeLatin America uye akasanganawo nehupenyu hwake nemumwe wake Georgette Philippart. Akaenderera mberi akazvipira kunyora, zvemakore iwayo iye aive Tungsten.
Munyori akatanga kunzwa kurwara muhutano munaKurume 1938, saka akaiswa muchipatara. Asi akatadza kupora uye akafa muna Kubvumbi 15, 1938 nemarariya, aive nemakore makumi mana nematanhatu ekuberekwa; ake akasara achizorora mumakuva eMontparnasse muParis.
- Vatema Heralds (1919).
- Ngano Yemusango (1923).
- Towards humambo hweSciris (1944). Yakanga yakanyorwa pakati pa1924 na1928.
- Russia pamberi pechipiri chirongwa chemakore mashanu (1931).
- Colacho, hama kana mapurezidhendi eAmerica (1934).
- Dombo rakaneta (1937).
- Paco Yunque (Posthumous edition, 1951). Yakanyorwa muna 1931.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Biography uye mabasa aCésar Vallejo
NDIANI AKANYORA NYAYA IYI, CHII CHINANGWA CHAKAITIKA
hapana zano kutsemuka xd
musi upi chaiwo wakaitwa izvi?
uyo akanyora chinyorwa ichi, zuva uye gore ndapota
Zvakanaka kwazvo kana chokwadi, ndinoda zuva rekuburitswa rechinyorwa ichi pliis.